Micha 7 HOF - Mika 7 AKCB
Mete sɛ otwabere nnuaba tasefo a
otwabere akyi mikodi mpɛpɛ wɔ bobeturo mu;
minnya bobe kasiaw na madi,
borɔdɔma aba a edi kan a mekɔn dɔ nso, saa ara.
2Wɔapra Onyamefɛrefo nyinaa afi asase so.
Anka ɔbaako a ɔteɛ mpo.
Nnipa nyinaa tetɛw na wɔhwehwɛ sɛ wɔbɛka mogya agu;
wɔde ɔtan sunsum wɔn ho wɔn ho mfiri.
3Nsa abien no nyinaa akokwaw bɔneyɛ mu;
ɔsodifo bisa akyɛde,
otemmufo gye adanmude,
wɔn a tumi wɔ wɔn nsa mu no yɛ nea wɔpɛ,
wɔn nyinaa bɔ mu dwene amumɔyɛ ho.
4Nea oye wɔ wɔn mu no te sɛ ohwirem;
nea ɔteɛ pa ara no, nsɔeban ye sen no.
Wʼatemmuda no aso,
da a Onyankopɔn reba wo nsrahwɛ.
Eyi ne bere a wɔn ani so bɛyɛ wɔn totɔtotɔ.
5Nnye obiara nni;
mfa wo werɛ nhyɛ adamfo mu.
Mpo, ɔbea a ɔda wo koko mu no
to wo tɛkrɛma nnareka wɔ ne ho.
6Ɔbabarima twiri nʼagya,
Ɔbabea sɔre tia ne na,
asebea nso tia nʼase
onipa atamfo ne nʼankasa ne fifo.
7Me de, mede anidaso hwɛ Awurade,
Metwɛn me Nkwagye Nyankopɔn;
na me Nyankopɔn betie me.
8Mma wʼani nnye, me tamfo!
Mahwe ase de, nanso mɛsɔre.
Sum aduru me de,
nanso Awurade bɛyɛ me hann.
9Sɛ mayɛ bɔne atia no nti,
Awurade abufuw bɛba me so,
kosi sɛ ɔbɛka mʼasɛm ama me
na wada me bembu adi.
Ɔde me bɛba hann no mu;
na mehu ne trenee.
10Afei, mʼatamfo behu
na wɔn ani bewu,
nea osee me sɛ,
“Ɛhe na Awurade wo Nyankopɔn no wɔ?”
Mʼani behu nʼasehwe;
mpo mprempren no, wobetiatia no so
te sɛ dontori a ɛwɔ mmɔnten so.
11Da a wɔbɛto wʼafasu no bɛba,
da a wɔbɛtrɛw wʼahye mu.
12Da no, nnipa bɛba wo nkyɛn
afi Asiria ne Misraim nkuropɔn mu,
mpo wobefi Misraim akosi Eufrate
afi po akosi po
ne bepɔw so akosi bepɔw so.
13Asase no bɛyɛ amamfo, esiane nnipa a wɔtete so
ne wɔn nneyɛe nti.
Mpaebɔ Ne Nkamfo
14Fa wo pema di wo nkurɔfo anim,
nguan a wɔyɛ wʼagyapade no,
a wɔn nko ara tete kwae mu,
wura frɔmfrɔm adidibea hɔ.
Ma wonnidi wɔ Basan ne Gilead
sɛ tete nna no mu.
15“Mɛyɛ anwonwade akyerɛ wo,
sɛnea meyɛɛ nna a wufi Misraim bae mu no.”
16Aman behu wo na wɔn ani bewu,
wɔn a tumi nyinaa afi wɔn nsa no.
Wɔde wɔn nsa betuatua wɔn ano
na wɔn aso besisiw.
17Wobedi dɔte sɛ awɔ,
ne mmoa a wɔwea wɔ fam.
Wɔde ahopopo befi wɔn abon mu aba;
wɔde osuro bɛdan wɔn ho ama Awurade yɛn Nyankopɔn,
na wobesuro wo.
18Hena na ɔte sɛ wo,
Onyankopɔn a wode bɔne kyɛ?
Wo a wode agyanom asefo nkae amumɔyɛ kyɛ wɔn.
Wʼabufuw ntena hɔ daa,
na mmom wʼani gye sɛ wobɛda mmɔborɔhunu adi.
19Wubehu yɛn mmɔbɔ bio,
wubetiatia yɛn bɔne so,
na woatow yɛn amumɔyɛ agu po bun mu.
20Wobɛyɛ ɔnokwafo ama Yakob
na woahu Abraham mmɔbɔ
sɛnea wokaa yɛn agyanom ntam
AKCB : Mika 7